Dagaal Saaka Aroortii ka qarxay Tuulada Qoryaale oo u dhow Degmada Ceel Buur iyo Ciidamada Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo halkaasi xoog milatarei kula wareegay. – Puntland Voice
April 4, 2010 11:29 am Views: 40
Ceel-buur (AB):- Ciidamo ka tirsan kuwa Ururka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa saaka weerar culus ku qaaday Tuulada Qoryaale oo ku dhow Degmada Ceel-buur ee Gobolka Galagaduu halkaasoo ay ku sugnaayeen ama ay gacanta ku hayeen Ciidamada Ururka Ahlu suna.
Labada dhinac waxaa dhexmaray dagaal waqti kooban socday oo aad u culsaa waxaana la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan taasoo keentay in dadkii halkaasi ku dhaqnaa intii dirirtu socotay ka hayaameen Tuulada markii ay u dulqaadan waateen hubka culus ee la isku adeegsanayay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada Alshabaab ay Tuulada ka sareen kuwii Ururka Ahlu suna markii dagaalk faraha looga gubtay uu halkaasi ka dhacay.
Ma jirto wax laga ogyahay khasaaraha shacabka iyo dhinacyadii dagaalamayay soo gaaray waxaana la ogyahay in iminka xaaladu degan tahay,tuuladana ay ku sugan yihiin Ciidamada Xarakada Alshabaab oo xoog milatari kula wareegay markii ay is fara saareen ciidmadii Ahlu Suna ee halkaasi hore ugu sugnaa.
la wareegitaanka Ciidamada Xarakada Alshabaaba ayaa ku soo aadeysa xili dhawaan Afhayeenka Ahlu suna uu sheegay in 6 bilood ka dib ay Ururka Al-Shabaab ka saari doonaan dhamaan Meelaha ay ka joogaan Soomaaliya.